प्रविधि- हाम्रो खबर प्रविधि – हाम्रो खबर
काठमाडौंका चार स्थानमा ‘वाटर एटीएम’, ५ रुपैयाँमा १ लिटर पानी पाइने ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका ,हेर्नुहोस
2021, February 12th, Friday
काठमाडौंका चार स्थानमा ‘वाटर एटीएम’, ५ रुपैयाँमा १ लिटर पानी पाइने ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका , काठमाडौँ– काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा वाटर एटीएम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।पानी खानका लागि आवश्यकता अनुसार सिक्का वा नोट राखेर स्वचालित रुपमा पानी आउने
झापामा एक युवकले बनाए यति राम्रो कार, मूल्य सुन्दा सबै चकित, हेर्नुस यी युवाको क्षमता, अब हवाइजहाज बनाउदै (भिडियो सहित)
2021, February 8th, Monday
झापा , दमक । झापाका एक युवालेले काठको कार बनाएका छन् । शिवराज लिम्बु नाम गरेका यि युवालाई गाउँलेहरुले बैज्ञानिक भनेर चिन्छन् । उनको यो कामलाई प्रोत्साहन गर्नका लागी हामीले यो भिडियो हजुरहरु सामु ल्याएका छौ । “गरिब परिवारमा जन्मिएका
नेपालमा बनेको( P-0 मोटरसाइकल )अप्रिलबाट विक्री सुरु हुने, कम मूल्यका नयाँ मोडल आउँदै,हेर्नुहोस के के छन् त फिचर्स !
2020, December 23rd, Wednesday
काठमाडौं । नेपाली युवाहरुले नेपालमै डिजाइन गरेर तयार गरेको इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल ४ महिनापछि विक्री सुरु हुने भएको छ । कम्पनीले यसअघि २०७६ पुस ३ गते काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजनागरि यसको ५० यूनिट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यात्री नामको
वैज्ञानिकले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मूला फलाए,नासाले गर्यो तस्वीर सार्बजानिक,हेर्नुहोस
2020, December 7th, Monday
एजेन्सी । वैज्ञानिकले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मूला फलाएको छ । यसलाई सन् २०२१ मा धर्तीमा ल्याइनेछ । नासाकी अन्तरिक्षयात्री तथा फ्लाइट इन्जिनियर केट रुबिन्सले पहिलो पटक इन्टरनेशनल स्पेश स्टेशनमा फलाइएको मूला उखेलेकी हुन् । केटलाई २० वटा मूलालाई प्याक गरेर
गुणस्तरीय पिच गरिँदैन, कार्पेटजस्तै उप्किन्छ, ठेकेदार भन्छन् :कालोपत्रे भोलिपल्टै नउक्काऔ अझै २/४ दिन हेरौ!
2020, November 8th, Sunday
काठमाडौं ,२३ कार्तिक । गोरखाको बाह्रकिलो–छेपेटार सडकखण्डमा गत आइतबार पिच गरिएको सडक सोमबार नै स्थानीयले उप्काइदिए । सडकमा गरिएको अस्फाल्ट भनिएको पिच मान्द्रोजस्तै उप्किएपछि स्थानीय बासिन्दाले गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै विरोध जनाए । सडकको धुलो नै नबढारी मनलाग्दी पिच हालिएपछि
चिनियाँ इन्जिनियरहरुले ७ हजार ६०० टनको बिशाल भवन लाई उठाएर ६२ मिटर पर सारे,आखिर कसरी सारे त? हेर्नुहोस
2020, October 25th, Sunday
चीनको शङ्घाई सहरका इन्जिनियरहरुले सात हजार ६ सय टनको एक विशाल भवनलाई त्यो रहेको ठाउँबाट अन्यत्रै सारेका छन् । इन्जिनियरहरुले सन् १९३५ मा बनेको शङ्घाईको लागेना प्राथमिक विद्यालयको पाँच तले भवनलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर अन्यत्रै सारेका हुन् । चीनका इन्जिनियरहरुसँग